Anyị History - Hangzhou Neoden Technology Co., Ltd.
Buru na Ebe igwe
Onye na-ebi Stencil
Akpaka Solder Printer
Ọkara Automatic Solder Printer
Ibu ibu na ibudata
Solder tapawa igwekota
AOI Ngwaọrụ na-anọghị n'ịntanetị
Ihe Ntanetị Kọmputa
PCB Nhicha igwe
Akpaaka PCB Nchekwa Machine
Steel ntupu nhicha Machine
Ihe owuwu nke Neoden Park amalitela, wee gosiputa ihe nlere ohuru-Neoden S1 na IPC Apex Expo USA, weputara igwe di elu n'ahịa: 1. IN6, efere na-eme ka ikuku na gburugburu ebe obibi nke e mere maka prototype. 2. FP2636, Frameless printer FP2636 iji chekwaa oge na ego maka ndị ahịa.
Ihe omuma ohuru NeoDen 7 weputara n'ahia, ya na sistemu uzo na-efe efe, nke kwesiri maka mmeputa ogbe na nzuko LED. Mee ogologo oge imekọ ihe ọnụ na Bara Uru Partners LLC dị ka anyị onye nkesa na America na ịzụlite ahịa na anyị nanị gị n'ụlọnga na Russia, South Korea na Taiwan.
Neoden3V, Neoden5, NeodenL460 ga-ahapụ n'oge na-adịghị anya, ha niile nwere igwefoto na ọnụ ahịa ha, ha ga-ahọrọ nke ọma maka obere ma ọ bụ ọkara ogbe mmepụta ma duru nzukọ.
Enweta ihe karịrị 50 nchọpụta Kemịkalụ na China Mainland na OA akwụkwọ sitere na TUV organization.R & D otu na-abawanye na ndị òtù 22, na-eme ka mmepe nke igwe ọhụrụ dị ngwa. Ngwa ahịa kwa afọ ruru 2300.
Ọgbọ nke anọ NeoDen4, atụmatụ nwere igwefoto, onye na-enye nri patented na ụgbọ okporo ígwè na-abanye n'ahịa ahụ, nwere ike izute ọtụtụ ihe achọrọ arị elu site n'aka ndị ahịa dị iche iche.
Gaa ngosi 2 nke mba ofesi, CEATEC JAPAN na Productronica di na Germany. Isi anyị ụlọ ọrụ kwagara ọhụrụ ụlọ na 7000+ sq.m-arụ ọrụ ebe.
Kwa afọ ire ruru 1800 tent, esenidụt elekọta mmadụ na-abawanye na- 10, ahịa òkè na-eto 150% na n'ụgbọ.
Hapụ ọgbọ nke atọ TM245P, yana ekele maka nzaghachi nke ndị ahịa na atụmatụ dị mma na ihe nlereanya a, anaghị adị ahịa. Kwa Afọ ahịa abawanye na 1400 tent; esenidụt elekọta mmadụ na-abawanye na 5, oghe 4 ngosi na China Chile
7 engineer sonyere ngalaba R & D anyị, ụlọ ọrụ na-emeghe & ọrụ na Jinan na Guangzhou, China.
-Ewu ogologo oge imekọ ihe ọnụ na 3 ọhụrụ esenidụt ụlọ ọrụ si Turkey, Chile na Europe.
Zụlite Ọgbọ nke abụọ TM240A, ahịa kwa afọ ruru 1000, gbasaa azụmahịa karịa mba 100; kwado Chipmax ma nye ha ikike dịka ndị nnọchi anya anyị na India; ụlọ ọrụ na-emeghe & ọrụ na Shenzhen, China
Melite ọkachamara SMT laabu, nye smt ngwọta karịrị 700 ahịa, Rasis na PSP sonyere anyị na-eme dị ka anyị onye nkesa na Iran na Brazil.
Ntọala nke NeoDen na Hangzhou, China, maka mmepụta na ọrịre nke igwe na ebe igwe, zụlite ọgbọ 1 TM220A, 500 + ndị ahịa si ụwa